hotera - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'hotera'
Wasu weku Cresta Engineering
Ana Wasu vakange vakagara pabottle store vachikurukura nyaya dzekumabasa kuHarare. Vekutanga vakati mazuva iwayo vakange vava kushanda kuCresta Jameson. Vechipiri vakati vakanga vachishanda ku Sheraton. Vechitatu vaishanda ku Cresta Lodge Vamwe vaviri vakanga vari Bulawayo Holiday Inn kudhuze neUBH.
Mumwewo mukomana akati akanga achishanda kuCresta Engineering. Akasekwa nevamwe kuita kunge achachema, vaiti ivo kana munhu usingashandi usanyeba. Akambenge anzwa kupi hotel yainzi Cresta Engineering.
kubhadharana pa hotera
Mai Tindo was driving, semunhu anga aneta ndobva vatsvaga Hotera yangairipedyo. After 3hrs vamuka vakuda kuenderera mberi nerwendo vakasvika pacounter kuti vabhadhare:
Mai T: How much kurara kwandaita?
Mai T: Ahh yakawandisa, deedzai manager!
Manager: Ehe ndizvo. 250 because tine maSwimming pool munomu.
Mai T: Handina kuswimma ka ini?
Manager: Imi maregererei? Plus tine vaimbi, tourist attraction, maSports akasiyana siyana
Mai T: Panezvese hapana chandaona ndanga ndakarara
Manager: Maregererei? Hanti manga muri muno zvenyu.
..Mai T vanobudisa chikwama chavo vobhadhara $50..
Manager: Ko imwe $200?
Mai T: Ndakubhadharisai kurara kwamaita neni!
Manager: Handina kurara nemi...!!!
Mai T: Hanty ndanga ndiri muno? Saka maregererei?
hotera mai mutyairi Kungwara
kuda zvinhu - menu mu hotera
Woenda Holiday Inn, woona menu yakanzi:
Salted white corn, rare jucy beans, garnished with rift potatoes & topped with organic unprocessed guacamole!
Wobva wa Order!
Wobva waunzirwa only to find out Mutakura with some Avocado.
Apo ndopaunatanga kuziwa kuti teacher we English akanga asiri munhu wekutamba naye.
hotera chirungu chikafu avocado kuda zvinhu mutakura
hotera dofo chikoro mukomana musikana
Woenda Holiday Inn woona menu yakanzi:
Salted white corn, rare jucy beans, garnished with rift potatoes & topped with organic unprocessed guacamole! - Price : $52,
'Wobva wa Order! Wobva waunzirwa, manhuchu ane nyemba, kotapeya nekambambaira paside ...
# Apo ndopaunatanga kuziwa kuti teacher we English akanga asiri munhu wekutamba naye.
hotera chirungu chikafu nyemba